Terms and conditions - StarChef - ခကျြပွုတျနညျး
ဧရာမိုဘိုင်းအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် တွဲဖက်သုံးနိုင်သော မိုဘိုင်းဖုန်း နှင့်/(သို့) PC များအတွက် အစားအစာ ချက်နည်းပြုတ်နည်းဗီဒီယိုကို စီစဉ်ပေးပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် တတိယပါတီပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများထဲ ဝင်သုံးခွင့်လည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
က) စာရင်းသွင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများ- ဤငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွင်အသုံးပြုသူကို ဝဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် စာရင်းသွင်းဝန်ဆောင်မှု၌ ပေးထားသည့် အချက်အလက်ဖြင့် စာရင်းသွင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝဘ်ဆိုက်တွင် မှတ်ပုံတင်ရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ဧရာမိုဘိုင်းတွင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲရန်၊ ၎င်းတို့အား ယာယီ (သို့) အမြဲတမ်း တန့်ထားရန်၊ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်ဖက်သတ် ပယ်ဖျက်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ထားရှိသည်။
လက်ခံရရှိသော အကြောင်းအရာကြောင့် ရုပ်သိမ်းခွင့်ဆိုလျှင် သုံးစွဲသူများနှင့် အသုံးပြုသူများဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် အခြားဖြည့်စွက်ဥပဒေများ၏ ပြင်ဆင်ချက်စာသားတို့အား အတည်ပြုထားသော နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် တော်ဝင်ဥပဒေပြု ဒီဂရိအမိန့် ပုဒ်မ 102 အရ ဖယ်ချန်ထားသည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်များသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီက ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ထားသည့် နှုန်းထားများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဧရာမိုဘိုင်းက အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်များအတွက် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို အသုံးပြုသူက ၎င်းတို့၏ တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ထားသည့် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာမှ ဘီလ်ပို့ပြီး တောင်းခံပါမည်။ ကြိုတင်ငွေဖြည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စမျိုးတွင်၊ ဤဝန်ဆောင်မှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို အသုံးပြုသူများ၏ ငွေစာရင်းမှ တောင်းခံပါမည်။
2. ဝန်ဆောင်မှု၏ ကုန်ကျစရိတ်များ
အကောင့်ဖွင့်လိုက်သောအခါ၊ အသုံးပြုသူသည် ကွန်မြူနတီတွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အရောင်းမြှင့်တင်အကြောင်းအရာကို ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အကျိုးခံစားနိုင်ပါသည်။ စာရင်းသွင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း- အသုံးပြုသူသည် အခွန်များအပါအဝင် GBP3/ တစ်ပတ် ငွေပေးချေမှုဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာကို ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အကျိုးခံစားနိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကို အသုံးပြုသူ၏ ဘီလ်မှ ဖြတ်တောက်ယူပါမည်။
အသုံးပြုသူသည် ဝန်ဆောင်မှုမှ စာရင်းဖျက်လျှင်လည်း၊ ၎င်းတို့က အကြောင်းအရာကို ငွေပေးချေထားသည့်ကာလအတွက် ဆက်လက် အကျိုးခံစားနိုင်ပါသည်။
3. ဝန်ဆောင်မှုထဲ ဝင်သုံးခွင့်
တရားဝင်အသက် (18 နှစ်) ရှိ သဘာဝလူသားများသာလျှင် ဧရာမိုဘိုင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တောင်းဆိုနိုင်ပြီး အကောင့်ဖွင့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဒေတာစီစဉ်ပေးသူက အမည်ဖော်မထားသော လုံးဝ ကွန်ပျူတာစနစ်အသုံးချ ဝန်ဆောင်မှူဖြင့် ပေးပို့သောကြောင့် ဧရာမိုဘိုင်းတွင် ၎င်း၏ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများရှိ အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးဒေတာဆိုင်ရာ သိမှုသုတ မရှိသလို ရှိလည်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ဧရာမိုဘိုင်းတွင် အသက်မပြည့်သေးသူက မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် သုံးနိုင်သော အသုံးပြုမှုအတွက် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဧရာမိုဘိုင်းသည် အသက်မပြည့်သေးသူ၏ မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူက ကျင့်သုံးသည့် 'မိဘ၏ထိန်းချုပ်ခွင့်' ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို အစားထိုးမည်မဟုတ်သဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသက်-18 နှစ်အောက်အတွက် ချုပ်ချယ်ထားသည်ဟု အကြံပြုပြောလိုပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးအတွက် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသော ပါတီသည် ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကိုင်ဆောင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ဧရာမိုဘိုင်းတွင် အခြားပြင်ပကွန်ရက်သုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်မပေးပါ။
4. အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်များ
ဧရာမိုဘိုင်းတွင် ၎င်း၏ အကြောင်းအရာ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွဲသုံးစားပြုမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှု (သို့) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူသည် ဧရာမိုဘိုင်းစနစ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွဲသုံးစားမပြုရန် တာဝန်ရှိပြီး၊ ဥပဒေများကို လိုက်နာလျက် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မှတ်ပုံတင်မူပိုင်များ၊ မူပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားဉာဏ်ပစ္စည်းနှင့် ရုပ်ဝတ္ထုမဲ့ပစ္စည်းမူဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆိုင်သော အခွင့်အရေးများ အပါအဝင် တတိယပါတီများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားရမည်။ ထို့နည်းတူပင် ဤဝန်ဆောင်မှုများကို စီးပွားရေးကြော်ငြာ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပါအချက်မှလွဲ၍ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အသုံးပြုသူက အတိအလင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
5. ဧရာမိုဘိုင်း၏ တာဝန်များ
ဧရာမိုဘိုင်း၏ တာဝန်များမှာ အသုံးပြုသူက ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကမ်လှမ်းထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပေးချေပြီးသော ငွေပမာဏ၏ တန်ဖိုးအရ မူအားဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဧရာမိုဘိုင်းတွင် ကိစ္စအားလုံးအတွက် ဥပဒေအရ လိုအပ်သည့်အရာရာတိုင်းအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
6. ဉာဏ်ပစ္စည်းနှင့် ရုပ်ဝတ္ထုမဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များ
ဧရာမိုဘိုင်း၏ ဆိုက်များ၊ ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာနှင့် ဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များ နှင့်၊ ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်များ ဆိူင်ရာ ရွေးချယ်စီစဉ်မှုနှင့် ဒီဇိုင်းကို မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့၏ မူပွားခွင့်၊ ဆက်သွယ်ခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ခွင့်နှင့် ဖြန့်ဝေခွင့်ကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိထားသ၍ တားမြစ်ထားပါသည်။ ထို့နည်းတူပင်၊ ဆိုက်များတွင် မြင်ရသော ခြားနားပေါ်လွင်သည့် အမှတ်အသားအားလုံးကို ဧရာမိုဘိုင်း (သို့) တတိယပါတီများက ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ၎င်းတို့ပိုင်ရှင်၏ လျော်ကန်ပြီး ကြိုတင် ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသော ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲနှင့် ၎င်းတို့၏ မူပွားခွင့် (သို့) ဖြန့်ဝေခွင့်ကို မည်သည့်နှင့်မဆို တားမြစ်ထားပါသည်။ ဧရာမိုဘိုင်းတွင် ၎င်း၏ဆိုက်များ၌ ပါရှိသော အကြောင်းအရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ (သို့) အစီအစဉ်များမှ တစ်ခုခုအား တစ်ဖက်သတ် ရုပ်သိမ်းရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ထားရှိသည်။
ဧရာမိုဘိုင်းသည် သုံးစွဲသူ နှင့်/(သို့) အသုံးပြုသူများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို နာခံပါမည်။ နိုင်ငံ (သို့) ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းမှုကြောင့် ဤသဘောတူစာချုပ်ရှိ အပိုဒ်တစ်ခုခုသည် သုံးစွဲသူ (သို့) အသုံးပြုသူကို ရင့်သီးစော်ကားမှုရှိသည်အဖြစ် ဆိုခဲ့ပြီးသော ဥပဒေပြဌာန်းမှုအရ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူနိုင်လျှင်၊ ၎င်းကို သက်ဆိုင်မှု-မရှိဟု ထည့်တွက်ပြီး သုံးစွဲသူ (သို့) အသုံးပြုသူကို မည်သည့်ကိစ္စနှင့်မဆို အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ဧရာမိုဘိုင်းသည် ကိုယ်ရေးဒေတာကာကွယ်မှုကို အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီတွင် ကိုယ်ရေးဒေတာအား လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းနာနှင့် ကာကွယ်သည့်နည်းနာတို့ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်အဝဖြင့် သင်၏မေးမြန်းချက်များကို ဖြေဆိုရန် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်း ဝယ်ယူမှုကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့် ပုံသေ ဘောင်ခတ်နိုင်ရန်အတွက် သင့်ဒေတာကို ကောက်ယူပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ၊ ဒေတာကာကွယ်ရေးရှိ လက်ရှိ ပြဌာန်းစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာ၍ ဆောင်ရွက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို လိုအပ်သည့်အခါ တောင်းခံပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော သင့်အခွင့်အရေးများအား သင် ကျင့်သုံးလိုစိတ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့က သိနားလည်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဒေတာ၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံပေးထားသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ဒေတာကို လက်ရှိ ဒေတာကာကွယ်ရေး ပြဌာန်းစည်းမျဉ်း (ဧပြီလ 27 ရက် 2016 ခုနှစ် ရက်စွဲပါ ပြဌာန်းစည်းမျဉ်း EU 2016/679) ၏ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ခံဒေတာထိန်းချုပ်သူမှာ မည်သူဖြစ်သလဲ။
ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဆန္ဒအလျောက် ကောက်ယူသော (သို့) စီစဉ်ပေးသော ဒေတာ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ဆက်သွယ်ပုံစံစာရွက်များ (သို့) အီးမေးလ်မှတဆင့် ပို့ပေးသော ဒေတာကို ဒေတာထိန်းချုပ်သူက လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ထိုသူ၏ အသေးစိတ်များကို အောက်၌ ဖော်ပြထားသည်-
အမညျ- Giant Mobile Society S.L.U.
မှတ်ပုံတင်ရုံးခန်း- Avenida Arcadi Garcia Sanz, 19။
မြို့ /မြို့ကြီး- Villarreal - Castellón
ဆက်သွယ်ရန်နံပါတျ- (+34) 964 52 33 31
မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သလဲ။
သင်၏ မေးခွန်းများ၊ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်များ (သို့) တောင်းဆိုချက်များကို ဖြေကြားရန်။
တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ သင်၏ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်ကို ဖြေကြားရန် (သို့) သင်၏ တောင်းဆိုချက်ကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
သင်၏ တောင်းဆိုချက်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်ကို အီလက်ထရောနစ်နည်းစနစ်များဖြင့် ပို့ပေးရန်။
စီးပွားရေးကြော်ငြာ (သို့) ဖြစ်ရပ်-ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျေနပ်သဘောတူချက် ဖော်ပြထားမှု ရှိနေသ၍ ပို့ပေးရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်။
သင့်ဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် မည်သည့်အချက်က ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စေသလဲ။
ဒေတာကောက်ခံရသူ၏ လက်ခံမှုနှင့် ကျေနပ်သဘောတူချက်။
သင်က ကျွန်ုပ်ဆို့ဆီ ဝဘ်ဆိုက်ပုံစံစာရွက်မှတဆင့် မေးမြန်းသော မေးခွန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့က ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းရန် တရားဝင်အကျိုးပြုပုံစံရှိထားသည်ဟု၊ ကျွန်ုပ်တို့က ထည့်တွက်ပါသည်။ ဤဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကို ကူညီရန်နှင့် မေးလာသည့်မေးခွန်းများကို ဖြေရှင်းပေးရန် လမ်းဖွင့်ပေးသောကြောင့် သင့်အတွက်လည်းပဲ အကျိုးပြုသလို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က သိနားလည်ထားပါသည်။
သင်၏ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်သည် အောက်၌ ဖော်ပြထားသောအခွင့်အရေးများအား ကျင့်သုံးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အခါ၊ သင့်ဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်အကြောင်းခံမှာ ကျွန်ုပ်တို့က တရားဝင်တာဝန်များကို လိုက်နာရန်ပင် ဖြစ်သည်။
ပလက်ဖောင်းရှိ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် သင်၏မှတ်ပုံတင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်၊ ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမှုအပေါ် စီမံထိန်းကျောင်းသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်၊ သင့်ကို ပလက်ဖောင်းရှိ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ အခြားနည်းဖြင့်လျှင် သင်၏ မှတ်ပုံတင်တောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
သင့်ဒေတာကို တတိယပါတီများသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် တရားဝင်နည်းနာအရ မလိုအပ်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့က ၎င်းကို လွှဲပြောင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ဒေတာကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဆက်လက်ထားရှိပါသလဲ။
ဒေတာကောက်ယူသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုံးရန် ဒေတာကို မလိုအပ်တော့သည့်အချိန်မှာ၊ ဒေတာကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိ မည်သည့်အချိန်မဆို ဖျက်ပစ်ပါသည်၊ (သို့) တရားသူကြီးများ၊ တရားရုံးများ (သို့) အခွင့်အာဏာရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်လက် သုံးနိုင်ချေရှိသည့်အချိန်ထိ ကုဒ်ခံသိမ်းထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှု ရှိ၊မရှိ သိခွင့်။
သင့်ဒေတာ မမှန်ခဲ့လျှင် ၎င်းကို ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုခွင့်။
သင့်ဒေတာကို ကောက်ယူထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလိုအပ်တော့လျှင် (သို့) သင့်က ခွင့်ပြုထားသည့် ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို သင် ရုပ်သိမ်းလိုက်လျှင်၊ သင့်ဒေတာကို ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုခွင့်။
သင့်ဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို အချို့ကိစ္စများအတွက် ကန့်သတ်ချက်ထားရန် တောင်းဆိုခွင့်၊ ဤသို့ဖြင့် ၎င်းကို လက်ရှိ ပြဌာန်းစည်းမျဉ်းနှင့်အညီသာလျှင် ဆက်လက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ဒေတာကို ပြင်လွယ်ပို့လွယ်နိုင်မှုအတွက် တောင်းဆိုခွင့်၊ ၎င်းကို သာမန် အသုံးပြုနေကြသော (သို့) စက်စနစ်သုံး-ဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသော ဖောမတ်ပုံစံဖြင့် စနစ်နကျဖွဲ့စည်း၍ စီစဉ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
တိုင်ကြားချက်တစ်ခုကို စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေး အေဂျင်စီ (သို့) အခွင့်အာဏာရှိသော အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းသို့ တိုင်ကြားခွင့်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ဒေတာကို သင့်လျော်စွာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မရှိဟု သင်က ယုံကြည်သည့်အခါမျိုး ဖြစ်သည်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို ဖော်ပြထားသော ကျေနပ်သဘောတူချက်အား အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၏ တရားဝင်ဖြစ်မှုအပေါ် မထိခိုက်စေဘဲ ရုပ်သိမ်းခွင့်။
သင့်အခွင့်အရေးများကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးနိုင်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ၏ လျှို့ဝှက်ထားမှုကို လေးစားရန်နှင့် သင့်အခွင့်အရေး ကျင့်သုံးမှုကို အာမခံပေးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ဆိုင်ရာပြဌာန်းစည်းမျဉ်းအရ၊ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ဝင်ကြည့်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခွင့်နှင့် ဖျက်ခွင့်အပြင် ၎င်းတို့၏ ပြင်လွယ်ပို့လွယ်မှုအတွက် တောင်းဆိုခွင့်ကို ကျင့်သုံးရန် သင့်၌ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည် (သို့) အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအနေအချို့တွင် ကန့်သတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ်လိပ်စာ rgpd@giant-mob.com ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး၊ သင်၏ တောင်းဆိုချက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်နှင့် သင်က ကျင့်သုံးလိုသော အခွင့်အရေးကို ဖော်ပြပေးပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်သောယူဆပါသည်သင့်တယ်, ငါတို့ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသက်သေတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ , Carrer Arcadi Garcia က Sanz, 19, 12540 ဗီလာ-အစစ်အမှန်Castellón - တနည်းအားဖြင့်သင်သည်လည်းအောက်ပါလိပ်စာဧရာမိုဘိုင်း Society က S.L.U မှဝိသေသလက္ခဏာကတ်မိတ္တူနှင့်အတူစာတစ်စောင်ကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှန်သမျှအတွက် သင့်ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို သင်က အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းရန် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
ဒေတာကောက်ခံရသူက ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကျင့်သုံးမှုကို ဧရာမိုဘိုင်းက သင့်လျော်စွာ စီမံဆောင်ရွက်မှုမရှိဟု ထင်မြင်ယူဆလျှင် စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ (https://sedeagpd.gob.es) သို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့က ဒေတာကောက်ခံရသူကို အသိပေးလိုပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီကို အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ချိန်မှာ 25/5/2018 ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီတွင် ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှကို ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ပြဌာန်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကဏ္ဍတွင်ပါသည့် အကြောင်းအရာကို ပုံမှန် ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်ဖတ်ရှုရာတွင် ချောမောလွယ်ကူစေရန်နှင့် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ဖြင့် ပြန်လှန်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းနာကို ရှာဖွေရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ သင်က ကွတ်ကီးများဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုကို ပိတ်လိုက်လျှင် (သို့) လက်ခံရန် ပျက်ကွက်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ နေရာအချို့ကို ဝင်ကြည့်နိုင်မည်မဟုတ်သလို ၎င်း၏အစီအစဉ်များမှ အချို့ဆိုလျှင် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို၊ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ထားပါ။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်အကျိုးဆောင် သီးသန့်ဖုန်းလိုင်းကို 900820817 ဖြင့်၊ info@giant-mob.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် (သို့) Giant Mobile Society S.L.U., Avda သို့ စာရေးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Arcadi Garcia Sanz 19 - 1 A, 12540 Vila-real (Castellón, Spain).
ဝန်ဆောင်မှုထံမှ စာရင်းဖျက်ရန် အောက်ပါလမ်းကြောင်းများမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ-
အခမဲ့ဖုန်း- 900 820817
ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ပယ်ဖျက်ခလုတ်ကို ကလစ်နှိပ်နိုင်ပါသည်
Copyright © Starchef.mobi
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခြေအနေများ | စာရင်းဖြုတ်ရန်
အမှား - မမှန်ကန်သော အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်
ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ထံစကားဝှက်ပေးပို့ရန် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖြည့်စွက်ရမည်
သင့်မိုဘိုင်းကို စစ်ဆေးပါ၊ သင့်စကားဝှက်ကို SMS ဖြင့်ပေးပို့ထားပါသည်
စကားဝှက်များစွာ ပေးပို့ထားသည်၊ နံနက်ဖြန်မှ တစ်ဖန်ကြိုးစားပါ။